‘कोषले बजार निर्माताको काम गर्न सक्छ’ – Sourya Online
‘कोषले बजार निर्माताको काम गर्न सक्छ’
सौर्य अनलाइन २०६८ फागुन २९ गते २:४६ मा प्रकाशित
ऋषिराम गौतम, कार्यकारी निर्देशक, नागरिक लगानी कोष
नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष लामो अनुभव सँगालेका ऋषिराम गौतम तीन वर्षअघि नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका हुन् । उनी कार्यकारी निर्देशक भएयता कोषमा करिब दोब्बर बढीले बचत बढेर २७ अर्ब पुगेको छ । बचतको मात्रा बढ्दै गएपछि कोषले लगानीको दायरा पनि फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह पूरा गरेका गौतमले बेलायतबाट एमबिए उत्तीर्ण गरेका छन् । कोषको समग्र विषयमा सौर्यका किरण ढकालले गरेको कुराकानी
कोष अहिले के गरिरहेको छ ?
कोषले विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर काम गरिरहेको छ । यसको कामको प्रकृति बृहत् छ । छरिएर रहेको पुँजीलाई सङ्कलन गरी देश विकासमा लगाउने तथा पुँजी बजारको विकास गर्नेतर्फ कोषले काम गरिरहेको छ । कोषले कर्मचारी बचतवृद्धि, अवकाश कोष, लगानीकर्ता हिसाब योजना, उपदान कोष, नागरिक एकाङ्क योजना, निजामती कर्मचारी बिमा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको जीवन बिमा कोषजस्ता सामाजिक सुरक्षण प्रदान गर्ने आयोजना तथा ट्रस्टी सेवाहरू र पुँजी बजार सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । विभिन्न किसिमका बचत कार्यक्रमबाट सङ्कलन भएको रकमलाई सफलतापूर्वक लगानी व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ ।
कोषले पुँजी परिचालनमा विविधीकरण गर्न चाहेको हो ?
कोषले निक्षेप राख्ने र ब्याज असुली गर्ने कामले मुलुकको आर्थिक विकासमा पर्याप्त योगदान पुग्न नसक्ने भन्दै दीर्घकालीन पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी अघि बढाएको छ । अब हामी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने आयोजनामा लगानी गर्न चाहन्छौँ । हाम्रो यो योजनालाई सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । दीर्घकालसम्म प्रतिफल दिने र आम नागरिकको जीवनस्तरमै परिवर्तन ल्याउन सक्ने किसिमले ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिए कोषको दीर्घकालीन पुँजी परिचालनबाट मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन सक्छ । दीर्घकालीन बचतलाई दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा परिवर्तन गरी आर्थिक रूपान्तरणसमेत गर्न सकिन्छ ।
कोषको सस्थागत संरचनामा पनि सुधार हुँदैछ ?
हामी कोषको सस्थागत संरचना परिवर्तनको पक्षमा छौँ । यसमा सुधार आवश्यक छ । अब नयाँं चुनौती थेग्नसक्ने संरचनाको आवश्यकता बढिसकेको छ । कोषको व्यवस्थापकीय संरचनामा क्रमिक सुधार, सूचना प्रविधि क्षेत्रका स्तरोन्नति, लगानी नीतिमा परिमार्जन, भौतिक संरचनाको विकासजस्ता क्षेत्रमा सुधार गर्ने योजना कोषले बनाएको छ ।
त्यसो भए कोषलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुभएको छ ?
कोषलाई बढी प्रभावकारी बनाउन यसको सबै कार्यलाई प्रतिफलमुखी र प्रविधियुक्त बनाउँदै लगिएको छ । लगानीलाई प्रभावकारी किसिमले विश्लेषण गरी जोखिम र प्रतिफलको आधारमा उच्च प्रतिफल दिने गरी लगानी केन्द्रित गर्ने, सङ्गठनात्मक स्वरूपलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गरी समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउने, सूचना प्रणालीलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकास गर्नेतर्फ काम भइरहेका छन् । ट्रस्टीका रूपमा रहेका संस्था भएकाले सुरक्षालाई प्राथामिकता दिँदै फन्डलाई बढी प्रतिफलमुखी र राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने र त्यस्तो फन्डलाई चुस्त राख्ने कार्य पनि आफ्नो ठाउँमा छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मका कर्मचारीको बचत, बिमाजस्ता कुराको तथ्याङ्क वेबसाइटबाटै हेर्ने कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइएको छ ।
कस्ता आयोजनामा जाने तयारी छ ?
विशेषगरी कोषको सुरक्षाका साथै प्रतिफल बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । बंैकको मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित कोषलाई दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयरमा लगानी तथा दुई अर्ब ऋण दिने विषय टुङ्गो लागिसकेको छ । अन्य केही आयोजनामा पनि कोषले लगानीको गृहकार्य गरिरहेको छ । विषेशगरी जलविद्युत्, सामाजिक, पर्यटन र अन्य उत्पादनसशील आयोजना, जसले दीर्घकालीन विकास तथा प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनामा लगानी गर्ने हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ ।
सहवित्तीयकरणको कुरा पनि उठेको थियो नि ?
तपाईंले भनेको ठिकै हो । हामी सहवित्तीयकरणमा जान चाहिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूसँंगको सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्न सकियो भने ठूला आयोजनाका लागि पुँजी पुग्छ र विकासले गति लिन्छ । सहवित्तीयकरणका लागि हाम्रो आफ्नै पूर्वाधार विकास पनि भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पूर्वाधार भएका संस्थासँग मिली लगानी गर्दा दुवै पक्षलाई सहज हुन्छ ।
सहवित्तीयकरणमा विगतको अनुभव त त्यत्ति राम्रो देखिएन नि ?
विगतमा सहवित्तीयकरण सरकारी बैंकबाट बढी भएको छ । त्यस्तो लगानीमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको देखिन्छ । अब त्यस्तो अवस्था छैन । निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरू आफैँले आयोजनाका बारेमा स्वतन्त्र रूपमा विस्तृत अध्ययन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । आयोजना उपयुक्त छ, छैन र प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने देखिएमा लगानी गर्दैनन् । त्यसैले निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकसँग सहवित्तीयकरणले कोषमा जम्मा भएका रकमबाट पुँजी निर्माणमा रूपान्तरण गर्न निश्चित रूपमा योगदान पुग्छ ।
अहिले कोषले बजार निर्माताको काम पनि गर्न लागेको हो ?
नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजार निर्माताको काम गर्न भनेको छ । हामीले नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा बजारनिर्माताका विषयमा कुरा राखिसकेका छौँ । बजारनिर्मार्ताका रूपमा सेयर कारोबार गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थानजस्ता संस्थाबाट पनि फन्ड उपलब्ध हुने विषयमा चर्चा छ । यदि सबै कुरा सकारात्मक रूपमा अघि बढेमा कोषले बजारनिर्माताका रूपमा काम गर्न सक्छ ।
सेयर बजारलाई कसरी हेर्नुभएको छ त ?
हाम्रो सेयर बजारमा बंैक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको छ । वास्तविक र उत्पादनमूलक कम्पनीको उपस्थिति ज्यादै न्यून मात्रामा रहको छ । सेयर परिसूचक विगतमा जुन रूपमा बढेको थियो, त्यो हाल वास्तविकतामा आएको मात्र हो । यस्तो अवस्थमा परिसूचक, त्यस्ता कम्पनीको नाफा र उसले दिने प्रतिफल तथा बजारको मनोभावनको सेरोफेरोमा घुमिरहेको प्रस्टै देखिन्छ ।